Horohorontany mafy nanozongozona ny nosy Sumatra any Indonezia
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany momba ny Indonezia » Horohorontany mafy nanozongozona ny nosy Sumatra any Indonezia
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao farany momba ny Indonezia • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Tsy nisy ny tatitra momba ny naratra taorian'ny horohorontany, izay nitranga taoriana kelin'ny misasakalina tamin'ny ora tany an-toerana (5h GMT).
Azon'ny horohoron-tany an'arivony isan-taona i Indonezia.
Ny nosy lehibe Sumatra any Indonezia dia misy mponina 58 tapitrisa mahery.
Nirefy 6.2 tamin'ny maridrefy ilay horohorontany ary tsy nisy fanairana tsunami navoaka taorian'izany.
Ny US Geological Survey (UGS) dia nitatitra fa nisy horohoron-tany mahery vaika tamin'ny maridrefy 5.9 voarakitra tany akaikin'ny nosy any avaratrandrefan'i Indonezia. Sumatra amin'izao fotoana izao.
Araka ny IndoneziaNy Sampan-draharahan'ny Meteorology, Climatology, ary Geophysical, ny horohorontany dia nirefy 6.2 tamin'ny maridrefy.
Tsy nisy fampitandremana momba ny tsunami navoaka taorian'ny horohorontany.
Ny nosy lehibe an'ny Sumatra fonenan'ny olona 58 tapitrisa mahery. Tsy nisy ny tatitra momba ny naratra taorian'ny horohorontany, izay nitranga taoriana kelin'ny misasakalina tamin'ny ora tany an-toerana (5h GMT).
Raha kely indrindra dia olona telo no maty ary maro hafa no naratra tamin'ny horohorontany namely ny nosy Indoneziana malaza any Bali tamin'ny 16 Oktobra ary niteraka fihotsahan'ny tany. Nisy horohoron-tany lehibe tamin'ny maridrefy 6.2 namely ny firenena nosy tamin'ny Janoary, nandrava trano maro, anisan'izany ny hopitaly, ary nahafatesana olona 100 mahery.
Any amin'ny faritra antsoina hoe Ring of Fire Pasifika - faritra miendrika arka misy hetsika horohorontany matetika - Indonezia nohozongozonin'ny horohoron-tany an'arivony isan-taona.